उपस्थिति प्रयोग सेवाहरू
रकम फिर्ता प्रबन्धन (डेटोक्स)
जेफर्सन सेन्टरमा, हामी जान्दछौं भावनात्मक र शारीरिक कल्याणको बीचमा कती लिंक छ। हाम्रो कल्याण सेवाहरूले दुबै परम्परागत र समग्र विकल्प प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको अनौंठो शक्ति र रुचिहरूमा निर्माण गर्दछ, र तपाईंको सम्पूर्ण स्वास्थ्य - दिमाग, र शरीर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ! के तपाइँ खान र राम्रो निदाउने तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंको समग्रमा सुधार गर्नुहोस् […]
मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सेवाहरू
हामी २. years बर्ष वा माथिका व्यक्तिका लागि मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रदान गर्दछौं। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सेवाहरू जेफरसन सेन्टर ग्राहकहरूको लागि प्रस्ताव गरिएको छ: व्यक्तित्व र सामाजिक-भावनात्मक संज्ञानात्मक परीक्षण ध्यान डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसअर्डर न्यूरो साइकोलोजिकल प्रि-सर्जिकल मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन कानूनी आवश्यकताहरूको पूर्तिको लागि प्रारम्भिक बचपन मनोवैज्ञानिक मूल्यांकनहरूले व्यक्तिको व्यवहार, कौशल, विचार, र व्यक्तित्व […]
मोबाइल औषधि - सहयोगी उपचार
… बाँकी पढ्नुहोस्